जापानी जीवन र संस्कृति! प्रकृति र मानिससँग मिलेर बस्नुहोस् - Best of Japan
यहाँबाट म तपाईंलाई जापानी जीवन र संस्कृतिमा परिचय दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ कि जापानी जीवन र संस्कृति बुझ्नको लागि कुञ्जी शब्द "सद्भाव" हो। त्यसकारण, म जापानी जीवन र संस्कृतिलाई यस साइटमा "सद्भाव" को दृष्टिकोणबाट संक्षेप गर्न चाहन्छु।
"सद्भाव" जुन जापानी जीवन र संस्कृतिमा आधारित छ
जापानी जीवन र संस्कृति परिचय परिचय सिफारिश भिडियो
जापानको बारेमा तपाईसँग कस्तो छवि छ? केहि मानिसहरु बाट जापान बुझ्न को लागी धेरै गाह्रो देश देखिन्छ।
जापान एक अर्थमा "गलापागोस" हुन सक्छ। महाद्वीपबाट टाढा टापुको देशमा, अनुपम रहने र संस्कृतिको पालनपोषण गरिएको छ।
जापानमा आएपछि धेरै मानिसहरू जीवन र संस्कृतिमा छक्क पर्दछन् जुन गालापागोस जस्ता विकास भएको छ।
टोकियो र ओसाका जस्ता विशाल शहरहरूको विकास हुँदा चार सिजनहरूको समृद्ध प्रकृतिले आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्दछ।
तीर्थनहरू, सुमो र काबुकी जस्ता परम्परा अझै बाँकी छन्, तर नयाँ संस्कृतिहरू जस्तै एनिमेसन, कोस्प्ले, रोबोटहरू, आदि एक पछि अर्को जन्मन्छन्।
एक देश जहाँ सबै विरोधाभासी चीजहरू सहजीवी हुन्छन्। त्यो जापान हो।
यदि तपाईं तलको छवि क्लिक गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई जापानी रहस्यमय सद्भावको संसारमा ल्याइनेछ।
मैले बिभिन्न पृष्ठहरू तयारी गरेको छु, त्यसैले कृपया धेरै पृष्ठहरू भ्रमण गर्नुहोस् र रमाईलो गर्नुहोस्।
जापानमा चार धनी seतुहरू छन्। जापानी कृषि अनुसार चार asonsतुहरु परिवर्तन परिवर्तन र जब धान प्रशस्त मात्रामा बढ्छ जापानी भगवानलाई धन्यवाद गर्न चाडहरु मनाउँछ। चार asonsतुहरूको यस चक्रमा, विभिन्न अनौठो संस्कृतिहरू विकास भएको छ। म तपाईंलाई परिचय दिन चाहान्छु जीवनशैली र ...
जापानीहरु वरपरका मानिसहरुसंग सद्भावको कदर गर्दछन्। यदि तपाईं जापान आउनुभयो भने, तपाईंले यो शहर भर महसुस गर्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, निम्न चलचित्रले देखाउँदछ, जापानी मानिसहरु चौराहे पार गर्दा, होसियारीसाथ एक अर्का लाई पार। मलाई लाग्छ कि यी जापानी विशेषताहरु मा चार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। ...
जबकि धेरै परम्परागत संस्कृतिहरू जापानमा रहन्छन्, धेरै समकालीन पप संस्कृति र सेवाहरू एक पछि अर्को जन्मेका र लोकप्रिय हुँदैछन्। जापान आएका केही विदेशी पर्यटकहरू परम्परा र समकालीन चीजहरू सँगसँगै छ भनेर छक्क पर्दछन्। यस पृष्ठमा, म ती चीजहरू पेश गर्नेछु जुन तपाईंले वास्तवमै आनन्द लिन सक्नुहुनेछ जब ...